QARSOON EE BEERASHADA GUUL LEH EE BASASHA ON WINDOWSILL - BOW
Ugu Weyn Ee Bow
Sida ay u koraan basasha cagaaran ee windowsill ah
Waxay u egtahay inaan sababta waxaan koraan basasha guriga, haddii khaanadaha dukaanka ee ku dhow dukaanka, xitaa xilliga jiilaalka waxaad ka iibsan kartaa noocyo kala duwan oo cagaaran ah? HXaqiiqdii, waxaa jira waxyaabo badan oo faa'iido leh oo ku jira hawshan. Cagaarka guriga lagu kariyo waa ilo dheeri ah oo fiitamiino ah iyo nafaqooyin, waxay qurxineysaa cuntada cajiibka ah, marwalba waa mid cusub waana mid degan, kharashkuna waa ku dhow yahay lacag la'aan. Oo yaa jecel yahay beerta cagaaran ee yar ee daaqadeeda bartamihii jiilaalka?
Noocyada basasha ee sii kordhaya ee daaqadaha
On windowsill inta badan ku koraan basasha caadiga ah, laakiin waxaad ku kori kartaa noocyada kale ee basasha (canot, dhir, batun, shnitt). Nalbada basasha waxaa loo isticmaalaa in lagu ciribtiro cagaarka illaa laba bilood, ka dib marka la gooyo. Onion-batun waxay bixisaa quudinta waqtigeeda iyo daryeelku waxay ku kori kartaa dherigii dhawr sano. Wixii beeridda ee basasha on windowsill ah ku haboon yahay noocyo kala duwan, laakiin waxa ugu wanaagsan in la doorto multi-abuur, kuwaas oo leh dhowr dabeecada ee hal nalka. Kuwani waa noocyo sida Bessonovsky, Chernigovsky, Spassky, Rostovsky, Timiryazevsky, Soyuz.
Ma taqaanaa? Basasha cagaaran waxay ku jiraan fitamiino badan (A, B1, B2, B5, C, E), macdan (potassium, sodium, magnesium, kalsiyum, macdan, copper, fosfooraska), carotene, flavonoids, phytoncides.
Xulashada iyo diyaarinta nalalka for beeritaanka
Ka hor inta aadan beerashada basasha guriga, waa muhiim in la doorto nalalka saxda ah ee beerto si aad u hesho dhalid sare. Nalalka beeritaanka waa in ay ahaato mid caafimaad qaba, iyada oo aan lahayn calaamado muujinaya cirridka iyo miisaanka dhalaalaya. Waa hagaag, haddii ay isku mid yihiin cabbirka. Dhexdhexaadinta ugu fiican ee nalalka - 2-4 cm, nalalka aad u weyn waa in la beeray haddii ay qudhuntay.
Laga soo bilaabo horay caleenta caleenta caleenta ayaa soo bixi doona si dhakhso ah. Si kor loogu qaado xayiraadda cagaarka, qaybta sare ee guluubka ayaa la gooyaa ama qoto dheer (saddex meelood oo meel ka mid ah dhererka) jaranjaro isku dhafan. Basasha la diyaariyey ka hor intaan la beeriin biyo kulul (50-52 ° C), xal xal ash ama kaneecada 20 daqiiqo. Marka xigta, nalalka waxay u baahan yihiin in lagu rusheeyo biyo qabow oo diirran.
Waa muhiim! Ka hor inta aadan ku beerin basasha digsi ama sanduuq, waxaa lagugula talinayaa inaad daaweyso weelka oo leh daawo jeermis dila (tusaale ahaan, daloolka potassium).
Xulashada ciidda loogu talagalay basasha sii kordhaya
Si aad uhesho cagaarka basasha daaqada hoose ee sanduuqa ama dheriga, marka hore waxaad u baahan tahay inaad duleelo dhoobo dhoobo ballaaran, ciid ama lebis jaban, ka dibna buuxi taangiga ciidda carrada peat, humus iyo carrada beerta ee saamiga 7: 2: 1. Way fiicantahay in lagu daro bacriminta fosfatka yar (1-2%) ama dambaska. Maadaama dhammaan walxaha lagama maarmaanka u ah cagaarka ay ku jirto guluubka, isku dar ah ciidda waxay ku haboontahay beerashada, kaliya clayey waa mid aan loo baahnayn. Isku darida culus waa in lagu qasi karaa ciid joogto ah.
Nidaamka abuurka faleebo
Markaad ku beerto basasha weelka, habka biriijka ayaa badanaa la isticmaalaa. Nalalka waxaa lagu beeray midba midka kale. Ma ahan lagama maarmaan in la daboolo ciidda, nuska guluubka waa inuu ka sarreeyaa dhulka. Looma baahna in laga walwalo in basasha ayan ahayn nafaqooyin ku filan carrada - dhammaan kuwa ugu baahida badan waxaa ku jira nalka laftiisa. Tan iyo guryo yaryar badi goobtu waa mid aad u xaddidan, waxaadna dooneysaa in aad kor u qaaddo basasha daaqada ee qoyska oo dhan, doorasho wacan waxay noqon doontaa in lagu beero basasha dhalo caag ah oo waaweyn ilaa 5 litir. Laga soo bilaabo kontaynarka noocan oo kale ah waxaad dhisi kartaa qol heer sare ah "beerta", haddii aad ka sameysid godad. Nidaamka degitaanka waa sida soo socota: ku rid ciidda hoose ee dhalada, nalalka nadiifiya sida daboolka ay ku jiraan dibedda, ku dabool carrada. Lakabyo kale oo ah carrada iyo nalalka si aad ugu sareyso dhalada, ka dibna ku shub. Halkii ciidda, waxaad isticmaali kartaa balka.
Waa muhiim! Wixii koritaanka joogtada ah ee basasha cagaaran waxaa lagu beeray sanduuqyo kala duwan oo leh mudo ah 10-12 maalmood.
Xaaladaha basasha sii kordhaya ee daaqadaha
Xaaladaha lagu khasbayo basasha cagaarka guriga waa kuwo aad u fudud.
Goobta iyo iftiinka
Ka dib marka la furo, weelka leh basasha waa in loo wareejiyaa meel qabow leh 10 maalmood si loo sameeyo nidaamka xididka. Later for horumarinta cagaaran casiir u baahan tahay iftiin wanaagsan: Basasha waxaa la dhigaa daaqadaha, balakoonka ama loggia. Haddii ay jirto iftiin la'aan, iftiin macmal ah ayaa loo adeegsadaa (nalalka, kaniisadaha LED).
Heerkulka ugu fiican ee koritaanka maskaxda gudaha waa 18-20 digrii. Waa inaysan qulqulin qoraxda ama kuleylka guriga.
Daryeelka iyo beerista ee baadad cagaaran on windowsill ah
Distillinta basasha cagaaran ee qalinka ah uma baahna daryeel gaar ah. Nalbooyinka ayaa biyo ku diiray maalin walba. Si aad u samayso cagaaran badan oo casiir ah, baadad in yar ayaa lagu buufin karaa.
Iska yaree cagaarka
Cagaar ugu horeysay waa ka wanaagsan in aadan taaban, si aanay u joojin koritaanka caleemaha haray. Basasha ayaa la gooyaa saddex toddobaad kadib marka la beero. Iyada oo ku xiran kala duwan, 16-18 maalmood baaluqu wuxuu gaari karaa 30 cm. Iska yaree baalasha ba'an, maaddaama ay koraan bartamaha. Markaad kordhiso qadar weyn oo basasha ah, waxaa wanaagsan inaad caleenta ku dhufatid basal horay loo gooyay, oo waxaad ku beeraneysaa mid cusub.
Kobcinta basasha cagaaran oo biyo ah
Sida caadiga ah qof kastaa wuu ogyahay sida loo basbeelo biyaha, sababtoo ah jikada aad u badan waxaad arki kartaa basasha koobabka ama dhalooyinka laga buuxiyey biyo. Nidaamka dhaadheerka waa mid aad u fudud, laakiin wali waxay haysataa sheygeeda.
Si aad u korisid basasha cagaaran ee ku yaala biyaha waxaad u baahan tahay weel (koob balaastik ah ama dhalo, dhalada, dhalooyinka caanaha, koob), biyaha iyo basasha. Weelka waa in laga buuxiyaa biyo iyo guluubka waa in lagu dhejiyaa qaabkaas oo kaliya xididada ayaa ku foori doona biyaha. Ujeedadaas awgeed waxaad isticmaali kartaa goobo kartoon ama dabool leh god. Haddii kale, nalalka qiiqa iyo urta aan fiicnayn looma dhaafi karo.
Ma taqaanaa? On sale waxaad ka heli kartaa dhirta hydroponic koronto ee sii kordhaya basasha.
Haddii aad qorsheyneysid inaad soo baxdo nalal badan, waxaad ka dhigi kartaa naqshad ka sameysan caag caag ah oo ukunta. Qaybta salka sare ee fiiladu waxay u adeegi doontaa sida saxda biyaha. Qeybta hoose ee baahida loo qabo in la sameeyo godad kasta oo unug kasta ah oo ku rid dhinaca sare ee saxda ah, gelinta laba ulo. Marka xiga, ku dar nalalka loo diyaariyay ee ku jira grooves iyo biyaha ku shub digsi. Maalmaha ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad baddashid biyaha ugu yaraan hal mar maalintii, ka dibna ku filan inaad sameyso dhowr jeer toddobaadkii. Nalalka koraya waxay u baahan yihiin inay si joogto ah u kormeeraan oo ay meesha uga saaraan mid aan habooneyn. Baastada quudashada waxay noqon kartaa boogaha koowaad. Si arrintan loo sameeyo, halkii litir oo biyo ah oo dibedda ah heerkulka qolka, ku dar 5 g ash alwaax ama labo shaambadood oo ah dharka macdanta sare. Goosashada ugu horeysa ee basasha cagaaran ayaa laga goyn karaa 10-15 maalmood.
Kobcinta basasha daaqadaha xilliga jiilaalka waxay noqon kartaa khibrad xiiso leh. Waa wax aad u fudud oo dhaqaale ah, natiijana ma noqon doonto mid dheer oo soo socota: ka dib hal toddobaad ama laba, waxaad heli kartaa basal cusub oo kareysa, oo qurxin doona suxuunta oo keenaya faa'iido aan ku filnayn jidhka daciifka ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Bow 2019